निजी क्षेत्रलाई पनि कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउन दिने तयारीमा स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी, सुरज बैद्यसँग उठबस !::Point Nepal
निजी क्षेत्रलाई पनि कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउन दिने तयारीमा स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी, सुरज बैद्यसँग उठबस !
निजी क्षेत्रलाई पनि को´भिडको भ्याक्सिन ल्याउन दिने तयारीमा स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी, सुरज बैद्यसँग उठबस !
काठमाडौं, २६ माघ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले निजी क्षेत्रलाई समेत खोप ल्याउन दिनेगरि तयारी थालेका छन् । अहिलेसम्म सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै खोप ल्याईएको र ल्याउने तयारी भैरहँदा मन्त्री त्रिपाठीले निजी क्षेत्रको चाहनाबमोजिम नेपालमा को´भिड–१९ को भ्याक्सिन ल्याउन दिनेगरि तयारी तिव्र पारेका छन् । मन्त्री त्रिपाठीनिकट उच्च स्रोतले जनाएअनुसार यसको लागि उनले उद्यमी सुरज बैद्यसँग नियमित छलफल गरिराखेका छन् । बैद्यले धेरैअघि देखि नै खोप ल्याउन प्रयास गरेका थिए ।
सुरुवातमा निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन नदिनेबारे आवाज उठेको थियो । तर, मन्त्री त्रिपाठीले बैद्यसँगको भेटवार्तापछि निजी क्षेत्रलाई पनि भ्याक्सिन ल्याउन दिनेगरि तयारी थाल्न र सोहीअनुसार प्रवन्ध मिलाउन मातहतका निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउने अनुमति दिएपनि उनीहरुले नेपाल सरकारका प्रचलित नीति तथा नियम, र निर्देशिकामा केन्द्रित रहेर खोप आयात गर्नुपर्ने आवाज मन्त्रालयभित्रैबाट उठेको छ ।
स्रोतकाअनुसार निजी क्षेत्रबाट खोप ल्याउनको लागि बैद्यले टिम नै खडा गरेका छन् । र, मन्त्री त्रिपाठीले पनि आफ्नो कोर–टिम बनाएका छन् । अहिलेसम्म भारतबाट दश लाख डोज भ्याक्सिन नेपाल आएको छ । र, धमाधम प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउने काम भैरहेको छ । चीनले पनि पाँच लाख डोज भ्याक्सिन दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बेलायतले पनि दिने प्रतिबद्धता जनाईसकेको छ ।